Site na oge okpomọkụ anyị na-akwadebe karịsịa: anyị na-eto eto, malite ịmalite ọzọ n'ụtụtụ, rie nri, mee ntụpụ zuru oke na ịgbanwe uwe mwụda. Ma, e nwere oge nwere ike ịkwata mgbede dị mkpa maọbụ ezumike. Kedu ihe ma ọ bụrụ na ị nwere ntutu isi ma ọ bụ etemeete. Na nke a emeghị, na mgbe niile ị na-ele anya zuru oke, ọbụlagodu nke kachasị uwe, ị ga-achọ iwu ole na ole.
Nkpọrọ ọkụ okpomọkụ kwesịrị ịdị iche na nke ị na-eji n'oge oyi. N'okpo ọkụ, ihe niile na-esi ísì dị ike, ị chọghị ka ọkụ si n'aka gị pụta, ndị mmadụ gbara gburugburu? Tụkwasị na nke ahụ, a gwara ndị na-ahụ ísì ụtọ dị iche iche ka ha gbanwee ísì ụtọ ahụ ka ọ dịkwuo ọkụ. Ihe na-esi ísì ụtọ na-adọta ụmụ nwoke na-agbakwụnye na-adọrọ mmasị na ya, ma ọ bụghị nanị maka inwe mmekọahụ siri ike. Na ísì ụtọ, ígwé ojii nke ụmụ ahụhụ nwere ike ịgbapụ. Ọ bụrụ na ịnweghị ka ị na-edozi ijiji na midges, gbanwee mmanụ ị na-emebu.
N'oge okpomọkụ anyị niile na-afụ ụfụ karịa na mbụ, nke a bụ eziokwu a ma ama. Ma nwa agbọghọ ọ bụla na-anwa ịghọ nymph ahụ, nke na-enweghị ihe ọ bụla gbasara ụdị nhazi ahụ nke ahụ anyị. Iji hụ na mmiri oke na mmiri na-esi ísì ụtọ adịghị ewute gị ma ọ bụ ndị ọzọ, ị ga-eji nlezianya na-elekọta onwe gị. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ịsachara ahụ, i nwere ike fesa ntụpọ nsogbu na okpukpo ntụ. Ndị a nwere ike ịbụ ụkwụ, ebe dị n'okpuru igbe na akụkụ inguinal - ya bụ, akụkụ ndị dị na ahụ nke na-adabaghị na ọgwụ ndị na-emekarị gị.
Eleghi anya ị ga-eche na ihe ịchọ mma na-emetụta mmetụta nke ikuku ikuku. N'oge oyi, ọ nwere ike ifriizi, na okpomọkụ - ọ ga-agbazekwa. Ọkpụkpọ ụrọ gị, nke dị na obere akpa, nwere ike gbazee na okpomọkụ. Ya mere, tinye lipstick n'ụlọ na ebe nchekwa, na n'ime akpa gị - a na-egbuke egbuke egbugbere ọnụ. N'oge ọkọchị, ihe nkedo niile kwesịrị ịdị mfe, ka ọ ghara ịkwụsị akpụkpọ ahụ site na iku ume. Ezigbo ihe mere ị ga-eji gbanwee akwa lipstick ka ọ bụrụ ìhè, ntọala maka mmiri ọkụ.
Igwe mmiri ikuku enweghị ike inwe mmetụta kacha mma na ntutu gị. N'ụtụtụ, ị na-eme mkpọtụ ahụ, ma ugbua site n'ehihie ọ dịghị nchịkọta fọdụrụ na ya. Gbanwee ụzọ maka ịmepụta ndị nwere ike ichebe olu na ọdịdị ntutu isi ogologo oge. N'okwu a, mousses na foams kwesịrị ịbụ ìhè, ma ọ bụghị ntutu ga-aghọ ngwa ngwa.
N'oge okpomọkụ, anyị na-eji oge buru ibu na mbara igwe, igwu mmiri na ọdọ mmiri, gbalịa ịga n'oké osimiri. Ihe a niile abụghị ụzọ kachasị mma isi emetụta ọnọdụ nke mbọ. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịhụ na anyanwụ na nnu mmiri na-egbuke egbuke na-enweta ihe na-adịghị mma odo tint. Ịlụ ọgụ nke a nwere ike ịbụ ụzọ abụọ - iji naanị lacquers ma ọ bụ kpuchie mbọ ahụ na ngwaọrụ nchebe pụrụ iche.
Ugboro ole na a gwaghị anyị na ọ dị mkpa ichebe akpụkpọ ahụ site na anyanwụ, na ọ gaghị ekwe omume ịmalite n'ehihie, ma ọ dịkarịa ala otu oge na okpomọkụ, onye ọ bụla n'ime anyị na-achịkwa iji nweta ọkụ ọkụ. Ọ bụrụ na ị hụ na akpụkpọ ahụ na-acha uhie uhie, na e nwere ihe mgbu, mgbe ahụ, ị ​​gafere ya, na-agbalị ị nweta ọbụna tan. Ejila mmanu mmanu na mmanu dichapu ya, mechie akwa ma obu tinye ya na mmiri oyi ma tinye ya na nsogbu. Na-ekpuchi si nafir, na-etinye ha ọkụ na-enwe menthol - obi ụtọ dị jụụ ga-eme ka ihe mgbu kwụsị.
Ọ bụrụ na ị na-elekọta onwe gị, ma ọkụ anaghị apụta, pimples nwere ike ịpụta. Ka nke a ghara ime, jiri scrub, na-asacha ya na salicylic acid. Ọ bụrụ na ị na-eji moisturizing creams, ka ha ghara greasy, kacha mma - na antibacterial utịp.
A na-akpụ isi ntutu.
N'oge ọkọchị, anyị na-emekarị ntụpọ, nke na-emetụta ọnọdụ akpụkpọ ahụ anyị. Enwere ike iwe iwe, ma eleghị anya nsogbu ahụ dị oke njọ, dịka ntutu isi. Ikwatu ha mgbe ufodu bu ihe siri ike. Were akwa washcloth na scrub na nnukwu ahụ, rụọ ọrụ nke ọma na akpụkpọ ahụ. Nke a ga - enyere ntutu isi aka ịhapụ onwe ha. Wee wepu ha ma ọ bụ agụba ma ọ bụ agụba. Ọ bụrụ na ịnweghị ike iwepụ nsogbu ahụ n'onwe gị, gaa na cosmetologist.
Mgbe okpomọkụ, akpụkpọ ahụ na-emepụta abụba karị, nke na-eme ka ememe eji eme ihe na-eme ka ọ dị mfe. Jiri ihe dị arọ na ngwaahịa na-emetụta ya, mascara waterproof. Na mkpịsị aka gị, mgbe niile nwere anụ ahụ dị ọcha na-eme ihe na-eme ka antibacterial mee nke a, nke a ga-enyere gị aka ịzigharị ihe ọjọọ nke mmezi.
Dịka ị pụrụ ịhụ, iwepụ nsogbu ndị nwere ike ịmebie ezumike gị ma ọ bụ mgbede ịhụnanya nwere nnọọ mfe. I kwesiri icheta otu esi egbochi ma obu kpochapu ha ngwa ngwa.
Karịa ịnara ntachu?
Oxygen mmanya ike na ịma mma
Ngwọrọgwu ndị na-elekọta onwe ha
Nzuzu nke ndi nwanyi abughi mgbe obula
Mmetụta dị mma maka ahụike mmadụ
Pencil Pencil Bliq Pen - ihe dị mma na ihe dị ize ndụ?
Ọka nká nke akpụkpọ ahụ
Ugbo ọka na garlic 2
Nyochaa ihe nkiri ahụ "The X-Files: Achọrọ M Kwere"
Ndị a ma ama kacha mma
Ntuziaka ndi mmadu iji kpoo akwara
Akwụkwọ nri goulash Ratatouille
Nri ehi na cumin
Olee otú ị ga-esi di di di
Pancakes na apata ụkwụ
Kedu ihe ndị ekwesịghị ịchekwa n'ụlọ?
Salad salad na ewu cheese
Okooko osisi si n'aka aka ha
Otu esi eme ka ulo Feng Shui mee nke ọma
Ntụziaka ọmụmụ: nri gingerbread zuru okè
Egwuregwu mmiri maka ndị inyom dị ime: contraindications
Kedu ka esi kwuo mba?
Nri nke nwanyi di ime
Ndị na-arịa ọrịa na-enye nwa ara
Egwuregwu Ile Anya